”SALMAAN INNAGA AYUU INAGA MID YAHAY HADDEYNU NAHAY AHLU-BEYTKA” XADDIIS
Aabahay wuxuu lahaa aseendo (beer) aad u weyn, beertaas ayuuna aabahay aalaaba ka shaqeyn jiray. Mar mararka ka mid ah ayaa wuxuu aabahay ka mashquulay aadistii beerta, sidaa darteed ayaa wuxuu igu yiri: ”wiilkaygiyoow maanta waad aragtaa inaan ka mashquulay aadista beerta, ee waxaad aaddaa beertii oo igala wareeg maanta shaqadii beerta”. Waan tagey annigoo u jeeda beerta.
Intii aan waddada socday ayaa waxaan waddada dhexdeeda ku arkay kaniisad ka mid ah kaniisadaha ay ku cibaadaystaan Nasaarada (kirishtaanka). Waxaa dhagahayga soo gaaray dhawaaqoodii iyagoo cibaadaysanaya, arrinkaasna wuxuu soo jiitay baraarugayga. Horey uma aanan aqoonin diinta kirishtaanka, taasina waxaa ugu wacnayd iyadoo uu aabahay uu igu xabisay guriga. Markii aan maqlay codkoodii isla markiiba waan u galay bal si aan u arko waxa ay sameenayaan. Markii aan aad u raad-raacay waxa ay sameenayaan ayaa waxaan jeclaystay salaadihii ay tukanayeen, diintoodiina waan jeclaystay waxaana naftayda ku iri: ” wallaahi diintani ayaa ka kheyr badan diinta aynu haysano, wallaahi ayaan ku dhaartaye kama aanan soo tegin ilaa ay qoraxdii ka dhacday oo sidaas ayaanan ku aadin beertii”.
Intaa dabadeed waxaan dadkii weydiiyay, meesha iyo xarunta ay ka soo jeeddo diintan, waxayna iigu jawaabeen dhulka Shaam. Habeenkii markii la gaaray ayaa waxaan ku noqday gurigeenii, waxaana ila kulmay aabahay isagoo i weydiiyay meeshii aan ku maqnaa, waxaana ku iri: ”aabe, waxaan maanta soo ag maray dad ku cibaadaysanayay Kaniisad ay lahaayeen, waxaana jeclaystay qaabkii ay u cibaadaysanayeen, iyaga ayaana iskala joogay ilaa ay qoraxdii ka dhacday”. Aabahay aad ayuu arrinkii aan iri uga argagaxay, wuxuuna igu yiri: ”wiilkaygiyoow diintaas aad sheegtay wax kheyr ay leedahay ma jirto, diintaada iyo diinta ay haysan jireen awoowayaashaa ayaa ka kheyr badan diintan”, annigana waxaan ku iri, maya-wallaahi-diintooda ayaa ka kheyr badan tan aynu hadda haysanno. Hadalkan danbe, aabahay wuu cabsi geliyay, wuxuuna ka cabsaday inaan ka laabto diinta aan haysto, sidaa darteed wuxuu igu xabbisay guriga isagoo labada lugoodna iga dabray.
Markii aynu nimid Shaam ayaa waxaan dadkii weydiiyay ninka ugu fadliga badan ee ka mid ah dadka haysta diinta Kirishtaanka, waxaana la ii tilmaamay wadaad ka shaqaynayay Kaniisad laguna magacaabo ”Al-usquf”. Ninkii ayaan u imid, waxaana ku iri, waxaan jeclaystay diinta Kirishtaanka, sidaa darteed waxaan doonayaa inaan kuu noqdo adeege/khaadim oo aan kuu shaqeeyo, dhinaca kalena aan kaa faa’iideysto kulana tukado salaadaha. Ninkii wadaadka ahaa arrinkii wuu iga oggolaaday, sidiina ayaan shaqaale ugu noqday.
Wax yar kama soo wareegan jeer uu maalintii ninkii wadaadka ahaa ka dhinto, waxaana aaskiisii isugu yimid dadkii Nasaarada (Kirishtaanka) ahaa, waxaana ku iri hadaladan: ”Ninkan saaxiibkiina ah wuxuu ahaa nin xun, wuxuu idin fari jiray inaad la baxdaan saddaqo, isagoo arrinkaana idinku boorrin jiray. Hase yeeshee, markaad maalkiina ka saddaqaysataan naftiisa ayuu keyd ahaan ugu dhigan jiray, masaakiintana waxna kama siin jirin!”. Dadkii ayaa hadalkii la yaabay, waxayna igu yiraahdeen: ”Halkeed ka ogaatay hadalkan?!”. Waxaan ku iri, annigaa idin tusaya kaasafoortadii uu ku keydsan jiray maalkaas. Waxay yiraahdeen: ”haa-oo-na tusi”.
Waxaan tusiyay meeshii uu maalka ku keydsan jiray, waxayna meeshii ka soo saareen toddobo ashuumood oo laga buuxiyay dahab iyo lacag. Markii ay arkeen dahabkii iyo lacagtii faraha badnayd ayaa waxay soo saareen go’aan tilmaamaya inaanan la aasin ninkii wadaadka ahaa, waxayna yiraahdeen: ”wallaahi aasi mayno”, iyagoo intaa kadib daldalay waxayna isagoo meyd ah ku garaaceen dhagaxyo.
Ninka cusub ma arag nin ka adduunyo neceb, kana aakhiro jecel ninkan, dhinaca kalena kaga daa’imid badan xagga cibaadada..
Wakhti dheer kama soo wareegan jeer booskii ninka wadaadka ahaa looga caleemo saaro nin kale. Ninkan cusub ayaan markale laasimay agtiisa. Ma aan arag nin ka adduunyo neceb, kana aakhiro jecel ninkan, dhinaca kalena kaga daa’imid badan xagga cibaadada. Si aan xad lahayn ayaan u jeclaystay, isaga ayaana in muddo ahba iskala joogay.
Markii uu wadaadkii aan la joogay dhintay, ayaa sidii uu igula taliyayba waxaan u kicitimay ninkii ku noola gobolka Al-Mawsil, markaan u imidna waxaan uga sheekeeyay khabarkayga, annigoo ku iri: ”hebel ayaa adiga ii kaa soo dardaarmay dhimashadiisa agteeda, si aan agtaada u laasimo, isagoo intaas ii raaciyay inaad tahay nin haysta diintii xaqa ahayd ee uu ku sugnaa ninkaas” Ninkii wuxuu igu yiri, haddaba anniga ayaad ila joogaysaa. Ninkii ayaan haddana iskala joogay, xaalad wanaagsanna waan ka arkay.
Muddo yar markay ka soo wareegatay wakhtigaas ayaa maalintii danbe ninkii geeriyooday. Intuusan geeriyoonin waxyar kahor ayaa waxaan ninkii ku iri: ”hebelow waad aragtaa inuu amarkii Eebbe kuu yimid, annigana xaalkaygu waad aragtaa, ee fadlan yaad adiga gadaashaa ii dardaarmaysaa inaan aado?”. Wuxuu igu yiri wiilkaygayow, wallaahi garan maayo ruux diinta u haysta sida aan annaga u haysanno marka laga reebo nin ku nool magaallada Nissiibiin (magaallo ku taala Shaam) ee ninkaas aad. Ninkii wadaadka ahaa markii la dhigay iilka, uuna dhintay ayaa waxaan u kicitimay ninkii ku noolaa magaallada Nissiibiin.
Markaan u imid ninkii waxaan uga warramay sheekadayda iyo nasteexadii ugu danbeysay ee uu i siiyay wadaadkii aan la joogay, wuxuuna si sahlan igu yiri: annaga agteena ayaad joogaysaa. Halkii ayaan iska joogay, waxaana la degganaa ninkii wadaadka ahaa. Waxaan ku arkay kheyrkii iyo wanaaggii aan horeba ka arkay labadii nin ee hore. Wallaahi maba sii joogin jeer uu ninkii haddana ka geeriyoodo, hase ahaatee intuusan dhimman kahor ayaa waxaan ku iri: ”xaalkayga waad aragtaa ee yaad ii dardaarmi lahayd inaan adiga gadaashaa la joogo”. Wuxuu yiri, wiilkaygiyow garan maayo ruux diinta u haysta sida annagoo kale aan ka ahayn nin ku nool magaallada Cammuuriya waxaana la yiraahdo hebel ee ninkaas u kicitim.
Ninkii ayaan u kicitimay, waxaana uga warramay sheekadayda, intaa dabadeedna wuxuu igu yiri: anniga ayaad ila joogaysaa. Sidiina ayaana ula noolaa ninkaas, wallaahi wuxuu ku tilmaamnaa hanuunkii ay ku sugnaayeen saaxiibadiisa kale. Hanti iyo maal ayaan kasbaday intii aan ninkan la joogay, waxaana haystay lo’ iyo xeyn arri ah.. Intaa dabadeed ninkii waxaa u timid geeridii u timid asxaabtiisii hore oo kale, markay u timid sakaraatkii ayaa waxaan ku iri, adiga waad og tahay amarkayga iyo xaalkayga sida uu yahay, sidaa darteed adi-ahaantaa yaad ii dardaarmi lahayd gadaashaa inaan diinta ka barto, dhinaca kalena maxaan sameeyaa? .
Intaa ka dib, ninkii wuu dhintay, isaga gadaashiis waxaan muddo dheer iska joogay magaallada Cammuuriya ilaa maalintii danbe ay magaallada ka soo maraan dad ganacsato carbeed ah, kana dhashay qabiilka la yiraahdo ”Kalbin”. Waxaan dadkii ganasatada ahaa ku iri, ka warrama haddii aan idiin raaco magaallooyinka carbeed, isla mar ahaantaana aan idin siiyo neefafkayga lo’da iyo arrigaba. Waxay yiraahdeen haa oo waan yeelnay. Waxaan siiyay lo’dii iyo neefafkii arriga ahaa ee aan haystay, sidiina ayaan nimankii ku raacay.
”waadul-quraa” ayey igu khiyaaneen nimankii aan lasocdey .
Waxaan soconnaba waxaynu nimid dooxada lagu magacaabo ”waadul-quraa” (waa tog u dhaxeeya magaallada Madiina iyo gobolka Shaam) meeshaas ayeyna igu khiyaaneen nimankii, iyagoo iga iibsaday nin Yahuudi ah, isaga ayaana shaqaale u noqday. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa ninkii wuxuu booqday nin ay ilmo adeerro ahaayeen ahna kana dhashay qabiilka Binii Qureythah, ninkiina ayuu iga gatay, wuxuuna ii sii raray magaallada Yathriba (Madiina).
Ma aanan maqlin halkan danbe jeer ay i qabato wax la moodo qandho, sidoo kalena waxaa igu dhacay jiri-raco ilaa aan ka cabsaday inaan ku-kor-dhaco sayyidkayga. Isla markiiba waxaan si dhaqso leh uga soo daaddegay geedkii timirta ahaa ee aan saarnaa, waxaana annigoo is ogeyn ku iri ninkii: ”maxaad tiri?”, bal iigu soo celi wixii aad tiri…. Sayidkayga ayaa iga carooday, wuxuuna igu dhuftay dharbaaxo daran, isagoo igu yiri: maxaa hadalkan kaa galay, u noqo shaqadii aad gacanta ku haysay.
Intaa ka dib waan iska tagay, waxaana billaabay inaan aruursado xabbado timir ah. Kolkii uu Rasuulka (scw) ka guuray xaafadda Qubaa, uuna u guuray Madiina ayaan markale u imid annigoo sida haddiyad, waxaana Rasuulka ku iri: ”waxaan arkay inaadan cunin saddaqada sidaa darteed waxaan maanta kuu keenay haddiyad aan kugu maamuusayo”. Timirtii haddiyadda ahayd ayuu Rasuulka (scw) cunay, sidoo kalena wuxuu asxaabtiisa amray inay la cunaan sidiina ayeey ula cuneen Rasuulka.
Markale ayaa naftayda ku iri, labo astaamood ayaad heshay, haddana markale ayaan u imid Rasuulkii Alle oo jooga meesha la yiraahdo Baqiic Al-qarqad (meel markii danbe noqotay xabaalaha) wuxuuna aasayay mid ka mid ah asxaabtiisa. Waxaan arkay isagoo fadhiya qabana labo go’, intaa kadib waan soo wareegay annigoo doonaya inaan eego dhabarkiisa bal si aan u arko shaabaddii (khaatam) uu ii tilmaamay saaxiibkaygii aan ku arkay magaallada Cammuuriya.
waxaan durbadiiba arkay khaatamkii
Markii uu Rasuulka (scw) i arkay annigoo eegaya dhabarkiisa isla markiiba wuu gartay waxa aan doonayo, wuxuuna tuuray go’ii dhabarkiisa saarnaa. Haddaan fiiriyay dhabarkiiba waxaan durbadiiba arkay khaatamkii (khaatumu-nebinnimada) waan aqoonsaday, isla markiiba korkiisa ayaan ku soo foorarsaday annigoo dhunkanaya jirkiisa oonayana.
Rasuulka (scw) ayaa yiri: ”khabarkaagu muxuu yahay?!”. Waxaan uga sheekeeyay sheekadayda, Rasuulka aad ayuu u jeclaystay sheekadayda, wuxuuna jeclaystay inay asxaabtana bal ay iga dhegeystaan anniga, waana uga sheekeeyay. Si siyaado leh ayeey ula yaabeen sheekayada, si aan xad lahayna way ugu farxeen.
Daabacaad: January 1, 2001